क्रसवर्ड em प्रविष्ट गर्नुहोस् र emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
क्रसवर्ड अब हामी तपाईंलाई यो सुन्दर खेल बुझ्नको लागि तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा देखाउने छौं। यसको व्युत्पत्तिक अर्थबाट, यसको उत्पत्ति, यसको फाइदाहरू, पजल मोडलहरू अवस्थित छन् र यसलाई द्रुत तर द्रुत रूपमा समाधान गर्ने रणनीतिहरू पनि।
क्रसवर्ड: बिन्दु point बिन्दु कसरी प्ले गर्ने
एक बनाउन क्रसवर्ड नि: शुल्कका लागि अनलाइन, तपाईंसँग गर्नुपर्ने छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
तपाईं साइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल स्क्रीनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं बस .णी हुनुहुन्छ तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने भाषा र कोटी छनौट गर्नुहोस्। तपाईले पत्ता लगाउन सक्ने कोटीहरूमा: फलहरू, कम्प्युटरहरू, जनावरहरू देशहरू, तरकारीहरू र संगीत
अब तपाईले केहि उपयोगी बटन पाउनुहुनेछ। "आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्", बटन दिनुहोस्"प्ले"र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ"रोक्नुहोस्"र"पुन: सुरू गर्नुहोस्"कुनै पनि समयमा, स्क्रीन आकार बढाउनुहोस् वा बाहिर निस्किने खेल.
यसले प्रत्येक र प्रत्येक टुक्रालाई एकतामा बाँध्ने प्रबन्ध गर्दछ कि तपाईंले छनौट गरेको छवि सिर्जना हुन्छ।
एक खेल भरिसकेपछि, क्लिक गर्नुहोस् "निकास खेल" अन्य क्रसवर्डहरू गर्न।
¿कसरी एक शब्दकोष समाधान गर्ने?🖊
अब हामी तपाईंलाई आठवटा तरिकाहरू देखाउँदछौं जसले तपाईंलाई क्रसवर्ड्स गर्ने तरिकामा प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ:
१- ट्र्याकहरू प्रत्येक र प्रत्येक पढ्नुहोस्
तपाईंले क्रसवर्ड सुरू गरेको बेलामा गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो प्रत्येक र प्रत्येक सुराग माथि देखि तल सम्म पढ्नुहोस् र साधारण समाधानहरू पनि प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो एक विशेष दिशा मा जारी राख्न सुझाव छ। बाँया देखि दाँया वा विपरित र त्यसपछि माथि र तल तदनुसार अगाडि बढ्दछ। तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंले प्रत्येक र सबै ज्ञात समाधान रेकर्ड गर्नुभयो।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईंले प्रश्नहरूलाई अन्धाधुन्ध चयन गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई पार गर्नुपर्दछ, सायद केहि धेरै साधारण बक्सहरू तपाईको अगाडि पार गर्छन् तपाईको नजर नलगाईकन.
जब तपाईं क्रसवर्डको यो पहिलो चरण पूरा गर्नुभयो, तपाईं अब बरु कठिन प्रश्नहरूको अगाडि बढ्नुपर्नेछ जुन तपाईं अझै उत्तर दिन सक्नुभएन। यसले यी वर्गहरूको लागि अनुमान गर्न सजिलो बनाउँदछ र तपाईं अधिक सजीलो दोस्रो राउन्ड सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
अब प्रश्नहरूको उत्तर दिन सजिलो छ कि केवल बहुविध सम्भावित उत्तरहरू प्रदान गर्दछ। एक उदाहरण को रूप मा सेवा को लागी, यदि तपाइँ एक खोज्दै हुनुहुन्छ pron अक्षरहरूको साथ व्यक्तिगत सर्वनाम , तपाईं अझै ME, YOU, US, आदि बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले पहिलो चरणको साथ एक वा दुई अक्षरहरू पूरा गरिसक्नुभयो भने, केहि विकल्पहरू अब छिट्टै हटाउन सकिन्छ र उत्तम अवस्थामा, त्यहाँ एक मात्र समाधान बाँकी छ।
२- मार्करहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि अझै प्रश्नको लागि धेरै उत्तर विकल्पहरू छन् वा, सामान्य रूपमा, तपाईं उत्तरको बारेमा विशेष रूपमा निश्चित हुनुहुन्न, अस्थायी रूपमा कलमको साथ flimsily शब्द प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई पजललाई सुल्झाउने क्रममा, तपाईले खोज्नु भएको शब्दका लागि केहि अधिक अक्षरहरू भेटिए भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईको पहिलो विचार सही थियो कि थिएन।
कहिलेकाँही श wait्कास्पद शब्दको लागि बहु अक्षरहरू नभएसम्म पर्खनु राम्रो हुन्छ। यदि यो एक मात्र हो, उदाहरण को लागी Y को पनि, सम्भाव्यता धेरै छ कि बहु भिन्नताहरू अझै लागू गर्न सक्दछ। के राम्रो हुँदैछ भन्नेसँग तपाई केही बेर प्रतिक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाइँ आंशिक रूपमा निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँले चाहानु भएको शब्द फिट गर्दछ, तपाइँ यसलाई राम्ररी ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
3- एक ब्रेक लिनुहोस्
यदि तपाईं लामो समय सम्म एक शब्दमा अडिनुभयो र क्रसवर्ड मार्फत अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं डराउनु हुँदैन बिदा लिउ। त्यसो भए रहस्यलाई एकातिर राख्नुहोस्, तपाईको टाउको खाली गर्नुहोस् र अरू केहि गर्नुहोस्।
यो कसरी अचम्मको कुरा हो, केहि समय अन्तराल पछि फेरि प्रश्न फेरि पढ्दा तपाईं एक आश्चर्य प्रभाव छ जहाँ तपाईं पहिले फँसेको थियो। जसो पनि क्रसवर्डलाई सुल्झाउँदा समय कारक महत्वपूर्ण हुँदैन। तल रेखा चुनौती चुनौती हो कि छ।
- कभर स्टोरी खोज्नुहोस्
प्रत्येक क्रसवर्डमा खास शीर्षक शीर्षक हुँदैन। अधिक यदि हेडरमा कुनै कारण वा शीर्षक दिइएको छ भने तपाईले प्रश्न र उत्तरहरूको केहि अंश सोही दिशामा निर्देशित गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसोभए यसको मतलब यो होइन कि प्रत्येक र प्रत्येक शब्द यसमा आधारित छ। विशेष रूपमा, साना फिलर शब्दहरू, जस्तै सर्वनाम, संक्षेपहरू, र यस्तै, कुनै शीर्षकमा आधारित हुँदैनन्। तर यदि हेडरमा क्रिसमस वा शीतकालीन थिम छ भने, letters अक्षरको रूख ओएक भन्दा एफआईआर हुने बढी सम्भावना छ।
यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाईं बहु सम्भावित उत्तरहरूको साथ प्रश्नको साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले शीर्षक दिमागमा राख्नुहोस्, यसले तपाईंलाई सही मार्गमा मार्गदर्शन गर्दछ।
Other- अन्य भाषाहरूबाट शब्दहरू खोज्नुहोस्
को Crosswords ती पनि प्राय: विदेशी भाषाहरूमा शब्दहरू खोज्न प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि तपाई पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि सामान्य रूपमा यो शब्दकोष कहिल्यै गाह्रो हुँदैन। धेरै जसो समय, यो प्रश्नको समाधानको लागि अर्को भाषालाई पूर्णतया पोख्त पार्ने कुरा होइन। बरु, यो प्रख्यात छ साना शब्दहरू जुन भाषाको सामान्य प्रयोगमा तपाईंको भाषामा आएको हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले खोज्नु भएको शब्दका लागि केहि अक्षरहरू छन, तब अनुमान गर्न सजिलो हुनेछ।
What- तपाई खोज्नु भएको शब्दको प्रकार खोज्नुहोस्
कहिलेकाँही यो हुन सक्छ तर्कको कुन अंशमा समाधान वर्गीकृत गर्नुपर्दछ ठीकसँग पत्ता लगाउन प्रश्न चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई अन्त सुरक्षित रूपमा लेख्ने मौका दिन्छ। जब कुनै क्रियाको लागि खोजी गर्दा तिनीहरू प्राय: उही तरीकाले अन्त्य हुन्छन्। यो पनि त्यस्तै हो बहु शब्दहरू। यदि तपाइँ एक शब्द को बहुवचन को लागी खोज, यो पक्कै अन्त हुन्छ -is वा -s
एक तर्फ, तपाइँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ शव्दको अन्तिम अक्षरहरू प्रविष्ट गर्न, यदि तपाइँ सम्पूर्ण शब्दको बारे निश्चित हुनुहुन्न भने पनि। अर्कोतर्फ, शव्दको अन्त्यमा केहि अक्षरहरूले थप शब्दहरू अनुमान गर्न सहयोग गर्दछ जुन यसलाई चाँडै पार गर्दछ। जे होस्, यदि तपाइँ उचित समाप्ति बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, यसलाई अहिलेको लागि कलमको साथ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
- शब्दको बहु अर्थ
केहि प्रश्नहरूको साथ तपाईले एक पटक भन्दा बढी हेर्नु पर्छ। हुनसक्छ यो आफैलाई अस्पष्ट हुन को लागी सोध्नुहोस्। पहिलो, ब्यान्कोमा उदाहरणको रूपमा सेवा दिन प्रश्नको शब्दको फरक अर्थ हुन सक्छ भन्ने तथ्यले। यदि तपाइँलाई सोधिन्छ कि तपाइँ बैंकमा के गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले विचार गर्नुपर्छ कि यसको मतलब सीट बैंक र वित्तीय निगम बैंक दुबै हुन सक्छ।
तब जवाफ सक्छ "त्यहाँ बस" O राम्रो "पैसा लगानी गर्नुहोस् ".
त्यहाँ सम्भावना पनि छ कि नोट शाब्दिक वा हितोपदेश बुझीन्छ। कुनाको वरिपरि मनन कहिलेकाँही यहाँ आवश्यक छ। सधैं र सबै समयमा शब्दहरूको धेरै बारम्बार अर्थ लिने नगर्नुहोस्, तर अन्य चरणहरूलाई पनि विचारमा लिने प्रयास गर्नुहोस्। हाम्रो उदाहरणको रूपमा सेवा दिन, यदि तपाईंलाई रोम जान भनियो भने निश्चित रूपमा तपाईले कुनै खास सडक वा मार्गको नाम दिनुहुन्न तर उत्तर सबै नै हुन सक्दछ, भनाइ अनुसार।सबै सडकहरू रोममा जान्छन्".
- जब केहि पनि सहयोग गर्दैन ...
यदि तपाईंले यी सबै सुझावहरूको पालना गर्नुभयो र अझै निश्चित शब्दहरूको साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने, केहि सुझावहरूको लागि सोध्नुमा कुनै मतलब हुँदैन। त्यसो भए सल्लाह माग्नुहोस् केहि साथीहरु वा पुरानो जमानाका परिचितहरु वा परम्परागत वा डिजिटल सन्दर्भ कार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसो भए शब्दकोश, शब्दकोष वा विश्वकोश, ती मध्ये एक घरमा हुन सक्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं जानुहुन्छ र अर्का स्थानमा क्रसवर्डलाई सुल्झाउनु हुन्छ भने, तपाईं पजल पढाईका लागि बहु अनलाइन प्रस्तावहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो जानकारी तपाईंलाई उपयोगी भएको छ। र, यदि तपाईं अहिले तयार महसुस गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंको लागि तपाईंको लागि सुरू गर्न कुर्दै छौं क्रसवर्ड.
एक शब्दकोष के हो?📚
को Crosswords तिनीहरू रमाइलो खाली वर्गहरूको श्रृंखलाबाट बनेका हुन्छन् जुन तपाईंले अन्तत: खेल पूरा गर्नुपर्दछ। नि: शुल्क सुझावहरूको प्रयोग गरेर प्रत्येक शब्द फेला पार्नुहोस्। केहि शब्दहरू पूरा भए पछि, अन्य शब्दहरूमा केही अक्षरहरू स्वचालित रूपमा देखा पर्दछ, रिजोलुसन सजिलो बनाउँदै। यो अखबार र ग्याजेटहरूमा सामान्य छ र यसैले तिनीहरू इन्टरनेटमा पनि सफल छन्।
La शब्दकोष कठिनाई ढाँचा र शब्द संख्या को आधारमा परिवर्तन गर्दछ। कम शब्दहरू पार गरीन्छ र खेलमा अधिक शब्दहरू छन्, खेल पर्याप्त गाह्रो हुने सम्भावनाहरू त्यति नै बढी हुन्छन्। यसका अतिरिक्त, क्रसवर्डको शीर्षक अनुसार जटिलताको डिग्री परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं खेल्न सिक्नुभयो भने, तपाईंलाई मनपर्ने र तपाईंको ज्ञान भएको शीर्षक छान्नुहोस्।
क्रसवर्डहरू हाल छन् सबैभन्दा लोकप्रिय शौक मध्ये एकयद्यपि तिनीहरूले अन्य खेलहरू जस्तै मैदानमा हराएका छन् सुडोकु। त्यहाँ कतै कुनै पनि समाचार पत्र वा ग्याजेट हो कि शोक सेक्सन छैन जसमा एक वा बढी क्रसवर्ड त्रुटिहरू समावेश छन्। तर यो सबै कसरी सुरू भयो?
El पहिलो शब्दकोष हामीलाई थाहा छ कि डिसेम्बर २१, १ XNUMX १। मा जब अखबार भयो आइतबार न्यू योर्क विश्व "भनिने एक पज्जल प्रिन्ट गर्नुहोस्क्रसवर्ड", द्वारा विकसित आर्थर Wynne, लिभरपूलबाट एक अंग्रेजी चिनारी। पज्जल जनताको साथ तुरुन्त हिट भयो र प्रकाशनको लागि साप्ताहिक आकर्षण भयो।
यसको सफलताको बावजुद, १ 1924 २। सम्म यो पजल प्रकाशित गर्ने विश्व एक मात्र समाचार पत्र थियो, त्यस समयमा एक शुरुआत प्रकाशकले पुस्तक ढाँचामा विश्व द्वारा समयसँगै क्रसवर्ड्सको पूर्ण कम्पाइलेसन प्रकाशन गर्‍यो। साइमन र शुस्टर एउटा नयाँ मूर्खता शुरू गर्‍यो जुन ग्रहको सबैभन्दा ठूलो प्रकाशकहरू मध्ये एक हुने छ।
शब्द बोर्डवर्गाकार ग्रिडमा एनोटेट गरिएको अक्षरहरूको सेट समावेशको एकल प्रकारको एक्रोस्टिक प्रकार, ताकि ठीक उही शब्दहरू तेर्सो र ठाडो दुबै पढ्न सकिन्छ, जुन पुरानो समयको हो।
क्रसवर्ड को पूर्वज
क्रसवर्ड पहेलीको सब भन्दा पुरानो ज्ञात पूर्वज १ es औं राजवंश (१b२० - हजार) को राजा रामसेस दोस्रोको शासनकालको पहिलो वर्षमा उक्त समारोहको लागि नियुक्त प्रधान पुजारी नेभ-वेनेफको चिहानमा थेबेस शहरमा भेटिए। ख्रीष्ट भन्दा दुई सय) कोरिडोरको देब्रेपट्टि चिहानको भित्री कोठामा पुग्छ, क ठूलो ढु stone्गा जसमा मानव छविहरू र हाइरोग्लिफको श्रृंखला रेकर्ड गरियो.
त्यस पदमा मृतकको रक्षा गर्ने ओसिरिस देवको बारेमा केवल प्रशंसनीय प्रार्थनाहरूको श्रृ contains्खला मात्र छ जुन त्यस समयमा प्राय: आउँथन्थ्यो। अधिक Hieroglyphs को व्यवस्था गरीएको तरिका आश्चर्यचकित पुरातात्विकहरु। जम्मा त्यहाँ एघारवटा तेर्सो रेखाहरू छन्। तिनीहरूको मध्यभागमा, स्तम्भलाई अंकित गर्नका लागि चिनो लगाइएको थियो कि हाइरोग्लिफहरू, ठाडो रूपमा पढ्नु पनि अर्थपूर्ण छ।
त्यस पछि यो ग्रहको विस्तार हुँदै गइरहेको छ कुनै गजट वा अखबारमा अपरिहार्य।
शब्दकोष बिभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यसलाई विश्वव्यापी, आइकनिक, नाममात्र, नकारात्मक, विस्तार र अनुमान लगाएर वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। "सरल" स्तरको साथ शब्दकोषहरूमा, यो नाममात्र परिभाषा, भविष्यको पछि ती "धेरै गाह्रो" स्तरको साथ, अवस्था विपरित हुन्छ: भविष्यवाणी द्वारा परिभाषा नाममात्र पछि हुन्छ.
यद्यपि, शब्दकोष बिभिन्न कोटीहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ। हेरौं ती के हुन्:
यो क्रसवर्डको विधा हो जुनमा त्यहाँ कालो वर्ग छैन, जहाँ सहभागीले आफैले आफ्नो स्थान खोज्नुपर्दछ।
क्रसवर्ड ट्रान्सलेटर वा द्विभाषी
यो क्रसवर्ड भनेको सिक्नको लागि हो नयाँ भाषा.
यो मोडलिटीको प्रकार हो जहाँ प्रत्येक र प्रत्येक बक्स प्रविष्ट गर्नुपर्दछ एक अक्षरको सट्टामा अक्षरमा।
चरित्रको साथ क्रसवर्ड
यस प्रकारको क्रसवर्ड आज धेरै लोकप्रिय छ। समावेश गर्दछ एक चरित्रको तस्वीर जहाँ एक वा परिभाषाको बहु नाम वा उही समानको थरनाम अनुरूप।
यो जटिल मोडेलिटीमा वाक्य प्रयोग गर्दछ जसले वाक्यको शब्दहरू बीचको समाधान निर्माण गर्न वा पत्ता लगाउन निर्देशनहरू लुकाउँदछ। यो बेलायतमा एकल सामान्य कुरा हो जहाँ टाइम्सबाट क्रसवर्ड बाहिर देखिन्छ।